मुख्य पृष्ठप्रदेश १ समाचार स्वास्थ्यवीपी प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यमन्त्रीका भतिज र ज्वाइँको नियुक्ति, सल्लाहकारमा स्वकीय सचिवका दाजु
मङ्गलबार, ०९ मङ्सिर, २०७७ ३प्रतिक्रिया
विराटनगर, ९ मंसिर । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालका भतिज र ज्वाइँ वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा नियुक्त भएका छन् ।
वीपी प्रतिष्ठान धरानमा ढकालका भतिज अमृत ढकाल र ज्वाइँ सुमन पन्त अधिकृतसरहको पदमा नियुक्ति भएका हुन् ।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार माेरङ विराटचाेक घर भएका अमृतको नियुक्ति जनसम्पर्क अधिकृत र विराटनगर घर भएका पन्तको नियुक्ति प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका कानुनी सल्लाहकारको रुपमा छ । दुवैजनाले ११ कात्तिकमा नियुक्ति पाएका थिए ।
मन्त्री ढकालको दवावमा भतिज र ज्वाइँलाई उपकुलपति गिरीले नियुक्त गरेका हुन् । पन्त ढकालका बहिनीज्वाइ हुन । ‘मन्त्रीज्यूको प्रेसर आए पनि नियुक्त नगर्ने भन्ने कुरा आउँदैन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुवैजनाले जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ ।’
ढकालको समर्थनपछि डा. गिरीले उपकुलपतिमा नियुक्त पाएका थिए । मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । कम्युनिष्ट गढ मानिएको क्षेत्रबाट ढकालले मुस्किलले निर्वाचन जित्दा डा. गिरीले भोट माग्न सघाएका थिए ।
कानुनी सल्लाहकार मात्रै तीनजना
स्रोतका अनुसार वीपी प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालका स्वकीय सचिव भुवन खतिवडाका दाजुले पनि नियुक्ति पाएका छन् ।
ढकालका स्वीकय सचिव भुवन खतिवडाका दाजु चिरञ्जीवी खतिवडाले कानुनी सल्लाहकारको रुपमा जिम्मेवारी पाएका हुन् । चिरञ्जीवीको नियुक्ति पनि ढकालकै दवावमा भएको थियो ।
प्रतिष्ठान स्रोतका अनुसार उपकुलपतिका कानुनी सल्लाहकार मात्रै तीनजना भएका छन् । यसअघि शान्तिराम भण्डारी कानुनी सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त भएका थिए । एकजना कानुनी सल्लाहकार हुनुपर्ने ठाउमा तीनजना नियुक्त भएका हुन् । नियमावलीमा उल्लेख नभएका कारण तीनजनासम्मले नियुक्ति पाएका हुन् ।
प्रतिष्ठानका रजिष्टार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले तीनजना कानुनी सल्लाहकार भए पनि छुट्टा–छुट्टै स्थानमा रहेको उनले बताए । रेग्मीका अनुसार कानुनी सल्लाहकार खतिवडाले सर्वाेच्च अदालत हेर्नेछन् । भण्डारीले विराटनगर र पन्तले कार्यालयको विषयमा हेर्नेछन् ।
केही दिनअघि ढकाल र पन्तले अधिकृतसरह नियुक्ति पाएको उनले बताए । ‘उहाँहरुको नियुक्ति भएको हो,’ कोशी अनलाइनसँग उनले भने, ‘पन्तको नियुक्ति कानुन हेर्ने गरी र ढकालको नियुक्ति जनसम्पर्क हेर्नेगरी अधिकृतसरहको हो ।’ उनले मन्त्रीका आफन्त रहेको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।
डम्बर लोहार says:
नेपाललाई नातावाद र कृपावादले नराम्ररी गांजेको छ ; अंठ्याएको छ . उफ् ऽऽऽ यो परिपाटी र परम्पपराबाट कहिले मुक्ति पाउने होला र नेपालमा योग्य र सक्षम एवम् दक्ष जनशक्तिले निष्पक्ष ढंगबाट कहिलेदेखि काम पाउने होलान् ? खै , नेपालमा पञ्चे , काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट जो अाए पनि केही परिवर्तन भएन नै ; नेपालमा जुन व्यबस्था अाए पनि कुनै परिबर्तन अाउन सकेन र अाखिरमा नेपालमा जुनै जोगी अाए पनि कानै चिरेका भने झैं साबित भइसक्यो .
वम लावती says:
स्वास्थ्यमन्त्रीले नैतिक्ता गुमाए,
Jo sukai vayeni kaam garena dekhaye vaigo ni..ja pani yestai ho..BED gareka manxe ta sarkaree prasasn adhikrit hunxa ..management k lai vanxa thaha nahu nepal ma kati prasasab adhikrit xan..actula MBA and MBS garne le matra paunu parne ho yesto jageer..yo locksewa niti pani mlai bekar lagxa..bed gara six months gk pada and adhikrit ko jageer pau..yo sab kura chapnu ni baru..